सभापतिमा पुगेन बहुमत, दोस्रो चरणमा भिड्दै देउवा र डा. कोइराला (कसले ल्याए कति मत) - Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति पदका उम्मेदवार कसैले पनि बहुमत ल्याउन नसकेपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने भएको छ । सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा र डा. शेखरप्रसाद कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा हुने कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
समितिले मतदानका लागि मंगलबार अपराह्न ३ः३० देखि बेलुका ७ः३० बजेको समय निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय सभागृह र भृकुटीमण्डमै मतदान हुनेछ ।
पहिलो चरणमा देउवाले सबैभन्दा बढी २२५८, त्यसपछि डा. कोइरालाले १७०२, प्रकाशमान सिंहले ३७१, विमलेन्द्र निधिले २५० र कल्याणकुमार गुरुङले २२ मत ल्याएका छन् । सोमबार मध्यरातसम्म भएको निर्वाचनमा ४६७९ मत खसेको थियो । जसमा ७६ मत बदर भएको थियो । मतदाता ४७४३ जना थिए ।
विधानमा सभापति पदको निर्वाचन हुँदा खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको समितिले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत नकटाए सबैभन्दा बढी मत ल्याउन दुई प्रत्यासीबीच पुनः मतदान गराउनुपर्छ ।
सभापतिबाहेक बाँकी पदाधिकारी र सदस्यको मतगणना पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हुने समितिले जनाएको छ ।
Published On: Tuesday, December 14, 2021 Time : 13:22:47 209पटक हेरिएको